Trendy accessories izvo zvatove kutsvaira mwaka uno | Bezzia
Susana godoy | 10/09/2021 10:00 | Complements
Iko kune ekutanga plugins uye ipapo izvo zvinoyevedza zvishongedzo zvatichaona mumwaka wega wega. Asi mune ino kesi isu takasiiwa nematsutso uye nguva yechando 2021-2022 nekuti isu tave kutosvika. Saka, inguva yekutsvaga zvese zvinotora uye zvakawanda.
Dzimwe nguva tinoda kutevedzera zvedu zvitaera asi hazvikuvadze kuzvibatanidza uine mamwe madhairekitori evatambi. Nekuti musanganiswa unogamuchirwa unogara uchiwanika pameso edu akanaka. Kana iwe uchida kuziva zvatiri kutaura nezvazvo, saka usapotsa zvinotevera.
1 Maxi mhete achiri maitiro akakura
2 Mavara kubva pamutsipa kusvika kumusoro
3 Mabhanhire anouya pakati pezvinhu zvinoyevedza
4 Masaga ane rakarukwa anopedza
Maxi mhete achiri maitiro akakura
Mhete ndeimwe yezvakakosha zvekutanga zvekuremekedza-kutarisa uye tinozviziva. Naizvozvo, ivo vanogara vakagadzirira kutisiya nemhando dzakasiyana zvinoenderana nezvatinoda. Gore rino uchave nezvakajeka, nekuti hapana chingaenda chisina kucherechedzwa navo, asi isu tinogona kuzvibvumira kutakurwa nemazana akakura pasina njodzi. Nekuti iyo maxi mhete ichave iri nyeredzi hombe yemwaka wekuvhuvhu nemwaka wechando. Yakakura iri nani. Ehezve, kana iwe uchinetseka kuti ndeapi mhando yemamodeli isu atinosanganisa muhukuru ihwohwo, tinazvo zvakajeka. Nekuti izvo izvo zvinopedzwa nemabhurasho mashoma ekupenya anozove anoonekwa zvakanyanya mwaka uno. Iwe unotova nemuenzaniso mupfungwa here? MuZara, semuenzaniso, unogona kuvawana mumarudzi akasiyana siyana uye maumbirwo.
Mavara kubva pamutsipa kusvika kumusoro
Zvinotaridza sekunge isu tinotarisa kumashure zvekare uye izvo zve kupfeka chigumbuso kunotiyeuchidza nezvema60s uko kwakakurumbira kwakatorwa nemubatsiri wakadai. Zvakanaka ikozvino unogona kunzwa kunge nyeredzi yeHollywood nekuda kwezvinhu zvine mutsindo. Nekuti ndivo vachange vari ivo vanokuperekedzawo pakubuda kwako kwezuva. Iwe unogona kusarudza pakati pemaitiro akasiyana uye mavara ayo mafemu anotipa zano, nekuti isu tinoisiya izvo kune yako whim. Asi panguva ino hatisi kuzoona chete kuti chirafu chakaiswa sei semusoro asi chichafukidza musoro wese kusunga pamutsipa.
Mabhanhire anouya pakati pezvinhu zvinoyevedza
Ehe, kana isu tikangotaura mabhandi, hachisi chinhu chinotishamisa nekuti isu tatoziva kuti vanogara vachitiperekedza mune zvakatarisana. Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti mune iyi kesi avo vane saizi yakakura vari kuenda zvakare vakasimba. Hongu, zvinoita sekunge pakati pezvishongo nemabhanhire, mukurumbira wechitarisiko uchakurumidza kuzadzikiswa. NaXLL apedza ivo vachange vari mukutungamira kwekupa yakawanda mwenje kune yako sitayile, kuti uipedze mumhando uye nemavara aunosarudza. Nekudaro, iwe zvirokwazvo uchawana iyo yauri kutsvaga, asi rangarira kuti usambofa wakakanganwa nezvazvo. Ose masosi maitiro uye nemaketani ndiwo mamwe emazano makuru akamirira iwe.
Masaga ane rakarukwa anopedza
Ichokwadi kuti mabhegi haakwanise kupotsa zuva redu rematsutso. Nekuti patinotaura nezve zvinoyevedza accessories, iwe haudi kupotsa iyo show futi. Asi, kunyangwe tichigona kuzvipfeka nenzira dzakasiyana uye nemavara akasiyana, pane imwe tsananguro inomira kupfuura mamwe ese. Izvo ndezve kupera kwayo uye ndezvekuti avo vane mabraids ndivo vachatora mwaka uno mutsva. Zvinotaridza kuti hatidi kusiya zhizha kumashure uye kupera uku kwakaonekwa zvakare mumwaka wezhizha. Saka ivo varipo uye vakasimba kupfuura nakare kose. Sarudzaiwo akapamhama uye ane tambo zvitaera nekuti ivo vanozopedzisa yako nyowani nyowani zvinoita kunge zvisati zvamboitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Complements » Iyo trend accessories izvo zvatove kubudirira